Phillips bụ ihe dị mma ma oge eruola maka Grealish - cheapinternetsecuritysoftware.com
Onye nnọchi anya gọọmentị Grosvenor Sport Jamie O’Hara leghachiri anya azụn’izu mbụ nke Euro 2020 na ihe kpatara’maverick’ Jack Grealish ga-eji bido Scotland.
Ọtụtụ nke oma megide Croatia
Enwere m mmasị t England na egwuregwu mmeghe. N’ime nkeji iri abụọ mbụ, ha mechara Donating miniature pịa. Ọ bụ ụbọchị na-ekpo ọkụ – ime nke ahụ maka minit 90 na-esiri ike mgbe niile. Ha gafere ya, mee ka ọ na-aga, m masịrị ihe ha na-achọ.
Ọ dị okeịrị anyị ka anyị merie egwuregwu nke mbụ ma anyị ka ga-enwetakwa asọmpi ahụ.
Echere m ihe kachasị mma na egwuregwu ahụ bụ Kalvin Phillips. Ekwesịrị m ịsị, ejighị m n’aka ma ọ dị njikere igwu egwu n’asọmpi asọmpi, megide ndị egwuregwu klas ụwa dịka Luka Modric.
Ọ gbara ogige ahụ gburugburu, ihe onwunwe un nke bọọlụ na-egbukepụ egbukepụ, o mere ka ihe mee. Ọ kere ihe mgbaru ọsọ na-agba ọsọ na bọl. Ọ bụ oke gbakwunyere; ọ dị nnọọ ụtọ ịhụ un ka ọ na-egwuri egwu d e ọkwa ahụ.
Southgate kwesịrị ime ole na ole tweaks
M ga-agbanwe ya megide Scotland. Aga m akpọ azụ azụ t even azụ ekpe. Echeghị m anyị kwesịrị igwu egwu Kieran Trippier,n’agbanyeghi na echere m ọ mere OK, ọ na-egwu ọfụma. ‘Vekwesịrị inwe aka ekpe na otu, ọ na-enye gị nguzozi. Echere m ọ na – enyere Harry Kane aka – ọ maara na ọ ga – ga enweta ọtụtụ obe sin’akụkụ ahụ.
Ọ ga-amasị m Jack Grealish igwu egwu. Ọ na-enye gị ihe dị iche. Megide Scotland, anyị ga-achọ onye nwere ntakịrị nsogbu, onye nwere ike ịgbanwe egwuregwu ahụ. M ga-ezu ike Phil Foden, M ga-akpọrọ ya pụọ. Ọ bụ nwata nwoke miniature chee na ọ na-egwuri egwu nke ọma mana nye Geralish ohere. Bịa, ọ bụ nnukwu asọmpi – Jack Grealish – only ka ọ banyen’otu ahụ. Nwere na-egwu ya.
Insigne na havetali enweela ọ joyụ ikiri
Ahụrụ m ụzọ Lorenzo Insignen’anya. Ọ na-agagharị, banye na bọl, na-abanye n’ọtụtụ nnukwu akpa, na-anwa ime ka ihe mee. Ọ bụkwa ntakịrị nke ọkpụkpọ nke ọkpụkpọ. O nwetara ihe m na-ahụtụbeghị; ọ na-echetara m Roberto Baggio, ụdị ụdị ọkpụkpọ ahụ pụrụ iche na-eme ka ihe si na-acha anụnụ anụnụ pụta. Enwere m mmasị t ma nwee obi ụtọ na-ekiri Italytali.
France dị oke egwu
Chọghị igwu egwu France. Lee anya na ndi egwuregwu ndi ha nwetara: ichoro izere France dika i nwere ike. Mana anyị agaghị – echere m anyị ga-egwu ha na gburugburu 16 ma ọ bụ nkeji iri na ise. Echere m ọ bụrụ na ị merie France, ị na-emeri asọmpi ahụ. Ha bụ otu egwuregwu.
Maka ihe ndị ọzọ website t Jamie t ndị enyi ọhụụ achọtara na Podcast Goal Podcast, lelee ntanetịime mmekọrịta anyị – gụnyere ọwa YouTube anyị!
Tags:bụ dị eruola Grealish ihe maka Mma Oge Phillips
Blazin´ Bullfrog oghere nyochaa na RTP
Site na Fire Toad Slot, Play’N Go laghachiri na oghere …
Isiokwu a nwere obere oge inye. Naanị maka ndị okenye. …
Golf | Ngwongwo Golfing kacha mma
Na Grosvenor Casino, anyị na-enwekarị agụụ maka egwuregwu. Anyị emeela …